Xoogaga Mucaaradka ee Yemen oo dowladda ku wareejiyay magaalada Xudayda – Radio Daljir
Xoogaga Mucaaradka ee Yemen oo dowladda ku wareejiyay magaalada Xudayda
Diseenbar 30, 2018 8:19 b 0
Saraakiil ammaanka qaabilsan oo magacooda qariyay ayaa sheegay in kooxda Shiicada ee ka dagaalamaysa dalka Yemen inay dekedda magaalada Xudayda ay ku wareejiyeen maraakiibta iyo ciidamada ilaalada xeebaha ee dowladda Yemen.
Wareejinta oo dhaqan gashay maalinimadii Sabtida ayaa la xaqiijiyay inay qayb ka tahay heshiiska nabadeed ee horaantii bishaan ay ku gaareen wadanka Sweden kooxo matalaya dowladda Yemen iyo Xuutiyiinta, xubno QM katirsan ayaa horay kormeer ugu tagay magaalada dekeedda leh ee Xudayda.
Afhayeenka kooxda Xuutiyiinta ayaa isaguna xaqiijiyay inay xoogagooda ka baxeen xalay magaalada dekeedda leh ee Xudayda, iyagoo fulinaya heshiiskii Sweden.
Heshiiska ayaa sidoo kalle dhigaya in xoogaga Xuutiyiinta ka baxaan magaalooyinka dekedda leh ee Salif iyo Rass Issa oo ah goobaha ugu badan ee ay ku xanibaynyihiin malaayiinta shacabka ee Yemen ee u baahan gargaarka, dhanka kalle maxaabiista in la iswaydaarsaday labada dhinac ayaa qayb ka ah heshiiska.
Dalka Yemen ayaa galay dagaal sokeeye oo soo bilowday sanadkii 2014kii, kadib markii xoogaga mucaaradku ay qabsadeen magaalooyinka waawayn, waxaana dagaal xun uu dhexmaray ciidamada dowladda oo taageero ka helaysa isbahaysiga Sacuudiga iyo Imaaraatka Carabta iyo jamhadda Xuutiyiinta oo xiriir la leh dowladda Iiraan.
Khasaaraha dhimashada ee duufaanada wadanka Filibiin oo korodhay
Farriin Siyaasadeed: “Waxaan qabaa welwel weyn in Puntland faraha ka sii baxayso, in ay faraha ka baxeyso Fadaraaliisimkii …” (dhegayso)